Umshuwalense Uholela Abadala | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Umshuwalense Uholela Abadala
Umshuwalense Uholela Kwabadala Ikheli le-imeyili
Abaphakeli beDathaDatha abaphakela abahlinzeka ngemishuwalense ephezulu Abaholela Abadala. Leli Isiqinisekiso esisezingeni eliphansi lomshuwalense. Yonke imininingo yedatha ibuyekeziwe futhi yaqinisekiswa i-95% yesibonelelo sikahulumeni esinembile. Sinikeza inani eliphakeme kakhulu lomshuwalense elihola inethiwekhi yedatha. Okwethu kune-imeyili yeminyaka engu-15 kuholela ekwandiseni isipiliyoni konke kungumthombo oqinisekisiwe kabili. Ngezansi kunohlu lwabanikezeli abanikela ngemihlahlandlela ephezulu yomshuwalense. Mane uchofoze kunoma yiliphi igama lenkampani ukuze ubone isibuyekezo esigcwele. Sibone ukwanda okukhulu komgwaqo oholayo ovela kubantu abadala abafuna imikhiqizo yoMshuwalense Wezempilo, futhi amanani abo akhula ngokushesha. Izinsizakalo zethu zokuhola esizenzayo zinikeza i-ROI efakazelwe. Sisebenza ngokukhethekile emidweni yabantu abadala futhi sinikezela ngokuholela okuhambisana ngokuphelele kuzimpawu eziningi ezahlukahlukene.
Thenga Uhlu lwe-imeyili Lomshuwalense
Umshuwalense Uholela Kwabadala Umbuzo & Impendulo